Vaovao - Mangataka fanampiana ny fiara fitaterana an-tsambo
Fiaramanidina shuttle mangataka fanampiana
Manafaka ny herin'olombelona ny seranan-tsambo, saingy mila arovana koa ireo milina fitehirizana sy famerenana tsy mahatsapa. Avia ary jereo raha misy ireto toe-javatra manaraka ireto mandritra ny fampiasana ny shuttle.
1. Mahatsiaro mafana ny akorany raha mikasika azy
Hamarino raha misy ny fanakanana ny hery ivelany;
Tapaho amin'ny tanana ny herinaratra, ary jereo ary ampiasao aorian'ny fihenan'ny mari-pana;
Hamarino raha mampiseho izany fa be loatra ny motera mandeha na ny moto mitondra. (Ampirisihina ny mpanamboatra handrindra ny fampisehoana mavesatra na ny fanairana fanaovan-javatra rehefa mamolavola)
2. Misy feo hafahafa rehefa mandeha eny amin'ny làlana
Hamarino raha misy raharaham-bahiny na misy endrika malemy ny làlana;
Hamarino raha simba ny kodiarana mpitari-dalana na ny kodiarana mandeha amin'ilay zotram-piaramanidina.
3. Mijanona tampoka eo am-pandehanana
Hamarino ny kaody fampisehoana diso, ary hamaha ny lesoka eo amin'ny fijanonana arakaraka ny famakafakana kaody;
Aloavy haingana araka izay azo atao izy raha ambany ny bateria, ary diniho ny fanoloana ny bateria raha toa ka tsy voaloa ara-dalàna izany.
4. Tsy afaka manomboka ara-dalàna
Tsy afaka manomboka ara-dalàna aorian'ny fanindriana ny switch. Zahao ny haavon'ny bateria amin'ny fanaraha-maso lavitra na malalaka ny plug-n'ny herin'ny bateria; raha mbola tsy afaka manomboka ara-dalàna ny bateria aorian'ny fikaroham-bahaolana, dia asaina mifandray amin'ny mpanamboatra anao hahazoana antoka.
5. Tsy afaka miditra sy mivoaka ny trano fanatobiana entana ara-dalàna
Aorian'ny famadihana ny seranan-tsambo dia tsy misy hetsika fandinihan-tena mialoha, na misy hetsika fizahana tena homing voalohany fa ny buzzer dia tsy maneno. Raha mbola tsy mety ny bateria aorian'ny fikaroham-bahaolana, dia asaina mifandray amin'ny mpanamboatra anao ny fanamboarana.
Fotoana fandefasana: Jun-03-2021